June 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကွန်ပြူတာ ဓာတ်မှန် Ultrasound ခဏခဏရိုက်တာ ကလေးထိခိုက်နိုင်လား? ကွန်ပြူတာ ဓာတ်မှန် Ultrasound ရိုက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ၉ လကာလအတွင်းမှာ ကလေးအနေအထားသိဖို့၊ အချင်းအနေအထားသိဖို့၊ ရေမွှာရည် အနည်းအများသိဖို့၊ ယောကျာ်းလေးမိန်းကလေးသိဖို့၊မွေးမယ့်ခန့်မှန်ရက်သိဖို့ ရိုက်ကြပါတယ်။ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆိုရင်တော့ Ultrasound တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခန့်…
မိန်းမသားတို့ ကြောက်မိတဲ့ ဒီအချိန် အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးအချို့ အင်မတန်ကြောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်ပါ။ အမျိုးသမီးအချို့ဟာ ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်မှာ ဆီးစပ်နဲ့ ဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာ အလွန်အမင်းနာကျင်ကိုက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ခါးနာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း နဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်း တို့ပါတွဲဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ မီးယပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများရဲ့…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အဖြူဆင်းတယ်ဆိုတာ ? မမဗိုက်တို့အတွက် မိမိမှာ ရင်သွေးရှိပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ချိန်ကစ…ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို သာမန်ထက်ပို ဂရုစိုက်ကြရမှာပါ… ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တို့ ဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးပြသနာများထဲမှ ” မိန်းမကိုယ်တွင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း ” အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်… အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ……
Can Repeated Ultrasound give effect to Baby -
ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ သားသားမီးမီးတို့ သွားစတိုက်သင့်သလဲ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုသာမက သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးကိုပါ အလေးထားတဲ့ ဖေဖေမေမေတို့ အမေးအများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကတော့ သားသားမီးမီးတို့ကို ဘယ်အရွယ်မှာ စတင်ပြီး သွားတိုက်ပေးရမှာပါလဲ တဲ့။ အမှန်တော့ ဘယ်အရွယ်ကစပြီး သွားတိုက်ပေးရမှာပါလဲလို့မေးတာထက် ဘယ်အရွယ်ကစပြီး သွားနှင့်ခံတွင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရမှာပါလဲ လို့မေးသင့်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးလေးတွေကို…
ဟိုကိစ္စ စိတ်သိပ်မပါဘူးဖြစ်နေလား (အမျိုးသား) ဆွဲဆောင်မှုအင်အားဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း လှည့်ကြည့်ယုံလောက်ပဲစိတ်ပါပြီး ခရီးဆုံးထိသွားချင်စိတ်မရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ဆန္ဒ ကုန်ခန်းကျဆင်းမှုဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲဖြစ်နေပြီလို့ ယူဆရမှာပါ။ တခါတလေမှာ ပြီးဆုံးတဲ့ထိရောက်သွားပေမယ့် စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့ခံစားချက်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင် ဒါကိုလည်း လိင်စိတ်ကျဆင်းတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ် ဆန္ဒမပြည့်ခြင်းဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပေမယ့် အချိန်အတန်ကြာ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်ဖြစ်နေရင်တော့…
ကလေးဆိုးလေးများ ” ဒီကလေးနှယ်! ပြောမရဆိုမရ.. ချော့မရ ခြောက်မရနဲ့! ငါ့နှယ် စိတ်တွေလည်းကုန်ပါတယ် ” ဒါတွေက မဆန်းတော့တဲ့အသံတွေ။ဘေးအိမ်မှ ဒေါ်ဘုမတစ်ယောက် သူ့သားနဲ့တိုက်ပြွဲဖစ်နေသံ။ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်။သားဖြစ်သူက ခုမှ အသက်4နှစ်စွန်းစွန်း။ကဲချက်က မျောက်ရှုံးသည်။အမေရော အဖေရောမနိုင်။ရိုက်လည်း ရိုက်ရိုက်ပဲ။အကြောအတော်မာသည်။ဒီလိုကလေးမျိုးတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမနဲရှိသည်။…